दसैँका लागि नयाँ नोट वितरण गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले मिति तोक्यो, कतिसम्म निकाल्न पाइन्छ ? - Nepal Insider
Home/समाचार/दसैँका लागि नयाँ नोट वितरण गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले मिति तोक्यो, कतिसम्म निकाल्न पाइन्छ ?
13,927 Less thanaminute
सङ्खुवासभाबाट दुखद खबर : पूरा बस्ती नै सखाप
आज चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल आउँदा, सेनाको कमान्डमा १५ हजार फौज परिचालन, दर्जनौँ अन्तर्राष्ट्रिय उडान घण्टौं डिले हुने !
दुर्घटनामा बाँचेकी ४ वर्षिय एन्जिलाकी आमा बुटबलको अस्पतालको शैयामा अवस्था गम्भिर ?
बन्द हुँदै कमलपोखरीकाे कुमारी हल